Faiba glaasi Geogrid - China Xi'an Homey Technology
Description The faiba glaasi dị ka ihe onwunwe, adiaha a ụfọdụ ịkpa ákwà usoro mere nke Network Ọdịdị ihe onwunwe, na-echebe ndị faiba glaasi ma melite n'ozuzu arụmọrụ, site a pụrụ iche mkpuchi usoro etolite geotextile mejupụtara ihe. The faiba glaasi geogrid bụ ọhụrụ ụdị magburu onwe geotextile nke welie pavement na roadbed. The item ka nke kpara faiba glaasi filament kpara na ntekwasa. Ọ nwere elu ike ọdụdọ, ala elongation, elu-agbanwe modulus magburu onwe r ...
The faiba glaasi dị ka ihe onwunwe, adiaha a ụfọdụ ịkpa ákwà usoro mere nke Network Ọdịdị ihe onwunwe, na-echebe ndị faiba glaasi ma melite n'ozuzu arụmọrụ, site a pụrụ iche mkpuchi usoro etolite geotextile mejupụtara ihe.
The faiba glaasi geogrid bụ ọhụrụ ụdị magburu onwe geotextile nke welie pavement na roadbed. The item ka nke kpara faiba glaasi filament kpara na ntekwasa. Ọ nwere elu ike ọdụdọ, ala elongation, elu-agbanwe modulus magburu onwe iguzogide elu na ala okpomọkụ arụmọrụ wdg, mgbe n'elu mkpuchi ọgwụgwọ, na magburu onwe alkali-eguzogide ma na merela agadi-eguzogide, ọtụtụ-eji korota pavement, ciment ihe pavement na roadbed nkwalite; ma ike n'okporo ụzọ na-agbanwe pavement nwere ike tinye ha n'ọrụ, jiri ya tụnyere ihe na omenala ụzọ nwere ike belata na-eri, na-akpọ ndụ, gbochie ụzọ echiche cracks. faiba glaasi Geogridnwekwara ike-eji maka ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ elu, mmiri Conservancy, dam na ndị ọzọ na-adụ ala nkwalite na roadbed nkwalite.
1) High ike ọdụdọ, ala elongation
2) Ọ dịghị ogologo oge creep
3) Kwes kwụsie ike
4) Ndakọrịta na korota ngwakọta
5) Physical na chemical kwụsie ike
6) nchịkọta ntinye na mmachi
Ọ nwere ike na ọtụtụ-eji mmezi nke ochie cement pavement, ọdụ runway, dam, ná mkpọda nchedo, ụzọ na akwa pavement mkwado nhazi na ndị ọzọ engineering ebe.
Nkọwapụta na parameters
Osote: polyester geogrid
Basalt Fiber nwee ume Geogrid
Bitumen ntekwasa faiba glaasi Geogrid
Bitumen ntekwasa faiba glaasi Geogrids
Eriri Glass Building Geogrid
Eriri Glass Geogrid
Faiba glaasi driveway Geogrid
Faiba glaasi ntupu Geogrid
Faiba glaasi Triaxial Geogrid
Hdpe faiba glaasi polyester Geogrid
High Quality Sale faiba glaasi Geogrid
P faiba glaasi polyester Geogrid
ike ọdụdọ faiba glaasi Geogrid
Ogologo kpara faiba glaasi Geogrid